Qiso :Waxay Sugaysey 16 Sano isagoo Xabsi kujira ! | Saadaal Media
Qiso :Waxay Sugaysey 16 Sano isagoo Xabsi kujira !
Apr 6, 2019 - jawaab
Hadi Hashmari 16 sano oo uu xabsiyada israel ku xirnaa Laba maalin ka hor ayuu Nasiib u yeeshay in lasoo daayo oo uu Xoriyadiisa Dib u helo .
Gabadhii u mehersanayd ayaa sugeysay muddadi 16ka sano ee uu xirnaa oo Dhan ,intii uu xirnaa waxay Keydisey mushaharkii loo qoondeyyey Ninkeeda maxbuuska aha inti uu xirnaa,Lacagtaas waxay iibisay dhul kadibna waxay dhistay Guri ay ugu talagashay inay Degaan iyada oo rajeynaysay maalin un in uu usoo laaban doono oo xabsiga laga soo Dayn isaga oo xor ah.
Gabadhan ayaa la weydiiyey waxa u sahlay inay Sugto Qof aan laga Raja qabin in la soo Daayo ?
Waxay ku Jawaabtay
“ Hadii Qof doonistiisa iyo jacaylkiisu Dhab kaa yahay Dunida kale oo dhan kuuma muuqanayso isaga maahee, Waxaad sugi kartaa inta Cimrigaaga ka dhiman si aad hal maalin ula midowdo ,intii uu xirnaa xitaa saacad wax aan isaga ahayn Niyadayda masoo Gelin .
Hadii aan Weligii lasoo daayeen Xitaa waxaan hubaa inaan Noloshayda ku dhamaysan lahaa anigoo sugaya Hadi Hashmari Awoodaas iyo Goaankaas waxaa gaaray Xubin jirkayga kamid ah oo Waxa ku qoran qof kale aanuu ogaan karin Allah mooyee ,waxaa Mahad leh Allah oo qalbigayga ku sugay Qofkaan Rabay Dibna iigu soo Celiyey “
Waxaa Qoray Cabdirisaaq Jubba